ခရန်ဖို့ - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၈၅၁-၁၈၅၃ (အခန်းဆက်), ၁၈၅၃ (လုံးချင်း)
၁ ဝတ္ထု ဖြစ်ပေါ်လာပုံ
၂.၁ ကျွန်မတို့ အသိုင်းအဝိုင်း
၂.၃ အရင်တခါက အချစ်ဇာတ်လမ်း
၂.၄ ကောင်လေး ပီတာ
၃ အဓိက ဇာတ်ဆောင်များ
သားဖြစ်သူဆုံးပါးပြီးနောက် စိတ်ပြေလက်ပျောက်ဖြစ်စေရန် စာရေးရာမှ မြို့ပြမှ စက်ရုံလုပ်သားတို့၏ ဘဝကြမ်းကြမ်းကို ပုံဖော်ထားသည့် သူမ၏ ပထမဆုံးဝတ္ထု မေရီ ဘာတန် (Mary Barton) ထွက်ပေါ်လာသည်။ ၁၈၄၈ ခုနှစ်ထုတ် ထိုစာအုပ်မှာ အတန်အသင့် အောင် မြင်မှုရပြီး ချား ဒစ်ကင် နှင့် ရှားလော့ ဘရွန်တီ ကဲ့သို့သော စာရေးဆရာများနှင့် သိကျွမ်းလာသည်။ ခရန်ဖို့ ဝတ္ထုတိုများကို ချား ၏ မဂ္ဂဇင်းဖြစ်သော အိမ်နေရင်းစကားများ (Household Words) တွင် စတင် ဖော်ပြသည်။ စာအုပ်အနေဖြင့် ၁၈၅၃ ခုနှစ်တွင် ထွက်ရှိသည်။
မစ် မေရီ သည် ဒေါ်လေးဖြစ်သူ မစ် အက်ဘိုရာ ရှိရာ ခရန်ဖို့ သို့ ခေတ္တသွားနေစဉ် တွေ့ကြုံရသော အဖြစ်အပျက်များကို ဖော်ပြထားသည်။ ကိုရွှေထူး (ပြည်) ရေးဆွဲသည့် "ကိုတင့်တို့ ရပ်ကွက်ထဲမှာဗျာ ..." ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းတွဲနှင့် သဘောတရား တူသည်။ အခန်းအလိုက် ပါဝင်သည့်ဇာတ်ဆောင်များ ပြောင်းလဲသော်လည်း ဇာတ်လမ်းအားပြောပြနေသူ မစ် မေရီ ကမူ အမြဲ ပါဝင်သည်။
ဤအခန်းတွင် ခရန်ဖို့၏ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းကို ရှင်းပြထားပြီး အမျိုးသမီးများ၏ ရှေးရိုးစွဲဆန်ပုံကို ဖော်ပြသည်။
ခရန်ဖို့သို့ပြောင်းလာသော ကပ္ပတိန် ဘရောင်း နှင့် သူ၏ သမီးနှစ်ယောက်အကြောင်း ဖြစ်သည်။ ကပ္ပတိန် ဘရောင်း နှင့် သူ၏ သမီးကြီး ဆုံးပါးပြီးနောက် တစ်ကောင်ကြွက် မစ် ဂျက်စီ ကို ငယ်ချစ် ကပ္ပတိန် ဂေါ်ဒန် က လာခေါ်သည်။
မစ် ဒက်ဘိုရာ ကွယ်လွန်သည်။ မကြာမီပင် မစ် ဒက်ဘိုရာ ကန့်ကွက်သဖြင့် လက်မထပ်ခဲ့ရသော ငယ်ချစ်ဦး မစ္စတာ ဟောဘရု နှင့် ဆုံရသည်။ မျှော်လင့်ချိန်ရောင်နီပြနေချိန်တွင် ပါရီသို့အလည်ထွက်သော မစ္စတာ ဟောဘရု ဆုံးသွားရာ မစ် မတ်တီ၏ တစ်ကျော့ပြန်မည် ဟူသောယုံကြည်ချက် ဆုံးခန်းတိုင်သွားတော့သည်။
ငယ်စဉ်က ပညာမထူးချွန်သော်လည်း စစ်တပ်ထဲဝင်ကာ ဖခင်၏ဂုဏ်ယူခြင်းခံရသော မောင်ဖြစ်သူ ပီတာ၏အကြောင်းကို မစ် မတ်တီက ပြောပြသည့် ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။
မစ် မေရီ စမစ်
မစ် ဒက်ဘိုရာ ဂျန်ကင်
မစ် မတ္တီဒါ "မတ်တီ" ဂျန်ကင်
↑ Gaskell, Elizabeth. "Cranford". Oxford University Press. 2008.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ခရန်ဖို့&oldid=449832" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၉၊ ၀၉:၅၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။